Mushaharka Uu Sanadkii Cristiano Ronaldo Ka Qaato Juventus &
By Apdihakem Omer Adam	 On Oct 11, 2020
Xaqiiqada ah in weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo uu yahay ciyaaryahanka ugu mushaharka badan horyaalka Serie A ayaan wax layaab leh kugu noqon doonin balse arrinta fajaca leh ayaa ah inay horyaalkaas ka ciyaaraan kooxo uu ka ciyaaryahan ahaan ka dakhli badan yahay sanadkii.
35 sano jirkan ayaa Juventus sanadkii mushahar ahaan uga hela lacag 31 Milyan oo euro ah, afarta kooxood ee kala ah Hellas Verona, Udinese, Spezia iyo Crotone ayaa ah kuwa hela lacag lamid ah ama ka hooseysa mida CR7.
Dhab ahaantii xogtan oo laga helay wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee La Gazzetta dello Sport ayaa muujinaysa in Ronaldo uu ku dhawaad afar laab ka mushahar badan yahay ciyaaryahanka ugu soo dhaw ee guud ahaan horyaalkaas.
Xiddiga labaad ee ugu mushaharka badan Serie A ayaa ah Matthijs De Ligt oo ay Ronaldo isla Bianconeri ka wada tirsan yihiin kaas oo sanadkii mushahar ahaan 8 Milyan oo euro u hela.
Xiddiga saddexaad ee ugu mushaharka badan Serie A ayaa ah mashiinka goolasha ee Inter Milan ee Romelu Lukaku kaas oo 7.5 Milyan euro uga xaadira kooxdiisa balse kaalinta labaad ku geli kara haddii uu helo 1.5 Milyan gunnoyin ah oo uu Inter kula heshiiyay.
Ciyaaryahanada kale ee mushaharka sarreeya ka qaata Serie A ayaa ah Christian Eriksen (7.5 Milyan euro), Edin Dzeko (7.5 Milyan euro), Alexis Sanchez, Zlatan Ibrahimovic (7 Milyan euro) Arturo Vidal (6.5 Milyan euro) Gigi Donnarumma (6 Milyan euro).
Dhinaca kale tababaraha ugu mushaharka badan horyaalka Talyaaniga ayaa ah Antonio Conte oo 12 Milyan oo euro sanadkii qaata isla markaana uusan macalin kale u dhawayn iyadoo ay ugu soo dhaw yihiin Paulo Fonseca (AS Roma, 2.5 Milyan euro), Gian Pier Gasperini (Atlanta, 2.2 Milyan euro).
Apdihakem Omer Adam 76 posts
13 Breakfast Meals That Will Assist You Eat More healthy
Macalinkii Arsenal Ee Arsene Wenger Oo Ugu Dambayn Sharaxaad